Pebble manavao ny smartwatches mba hanohizan'izy ireo miasa aorian'ny fanidiana ny mpizara | Androidsis
Pebble manavao ny smartwatches mba hanohizan'izy ireo miasa aorian'ny fanidiana ny server-dry zareo
Rehefa avy novidian'i Fitbit tamin'ny desambra tamin'ny taon-dasa, Nampahafantatra an'ireo mpampiasa azy i Pebble fa hanohy hanohana ny fampiasa smartwatches miaraka amin'ny asany rehetra mandritra ny herintaona farafahakeliny. Nefa lany ny fotoana ary ny serivera an'ny orinasa dia mety hakatona amin'ny faran'ity taona ity raha tsy manana drafitra hafa amin'ity sehatra ity i Fitbit.
Ankehitriny, efa-bolana taorian'ny nanambarany ny fividianana Pebble, Nanapa-kevitra ny hamoaka fanavaozana firmware vaovao i Fitbit mba tsy hisy fiantraikany amin'ny mpanjifa ny fanovana ataon'i Pebble. Noho io antony io, na inona na inona finday misy anao, na Android io na iOS, tsy ho ela ianao dia afaka misintona ilay fanavaozana vaovao maimaimpoana.
Zava-dehibe indrindra amin'ny fanavaozana ny firmware vaovao ho an'ny smartwatches Pebble
Ny tena tanjon'ny fanavaozana vaovao dia avelao ny rehetra smartwatches Pebble misaraka amin'ny serivisy rahona, noho izany dia ho afaka hiasa ara-dalàna izy ireo na dia nakatona aza ny mpizara.
Aorian'ny fametrahana ny firmware vaovao, raha tsy tratra ny mpizara fanamarinana dia avelan'ny rindranasa finday hiasa ara-dalàna ny famantaranandro. Ankoatr'izay, amin'ny fanavaozana vaovao, ny mpampiasa dia afaka mandingana ny fizotry ny fidirana.
Na dia nesorina tamin'ny rafitra aza ny safidy hifandraisana amin'ny fanohanana ara-teknika, dia mbola afaka manararaotra ny mpampiasa Pebble miasa mba hanondranana ny angona diagnostika rehetra (toy ny tahiry amin'ny angon-drakitra momba ny fahasalamana rehetra nangonina hatramin'izao).
Raha manana smartwatch Pebble ianao atoro anao ny fametrahana ny fanavaozana Satria raha vantany vao mikatona ny mpizara dia mety tsy ho azo ampiasaina ny famantaranandronao raha tsy misy ny firmware vaovao.
Amin'izao fotoana izao, tsy fantatra izay drafitra ananan'i Fitbit amin'ny fividianana Pebble, saingy toa tsy liana amin'ny hanohy ny fampandrosoana ny sehatra io orinasa io. Na eo aza izany, miaraka amin'ny fotoana vitsy lasa izay taorian'ny nahazoana azy dia mbola miandry fotoana lava be isika hahalala ny tena drafitra nataon'i Fitbit.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Pebble manavao ny smartwatches mba hanohizan'izy ireo miasa aorian'ny fanidiana ny server-dry zareo
Xiaomi dia manomboka fa tsy mampitandrina ny Mi Pad 3 miaraka amin'ny RAM 4 GB ary maody mainty sy fotsy
Fitsapana maharitra: Samsung Galaxy S8 vs iPhone 7 Red